» म पहिलेनै उपाध्यक्ष पद दिन्थे ,मन दुखाउछन होला भनेर मात्र कार्यकारी अध्यक्ष दिएको हूँ! केपि ओलि म पहिलेनै उपाध्यक्ष पद दिन्थे ,मन दुखाउछन होला भनेर मात्र कार्यकारी अध्यक्ष दिएको हूँ! केपि ओलि – हाम्रो खबर
म पहिलेनै उपाध्यक्ष पद दिन्थे ,मन दुखाउछन होला भनेर मात्र कार्यकारी अध्यक्ष दिएको हूँ! केपि ओलि
2020, December 22nd, Tuesday
भेलालाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने आफ्नो रहर नभएको बताएका छन् । पार्टीभित्र आफूलाई घेराबन्दी गर्ने, देशी विदेशी शक्तिसँग मिलेर षड्यन्त्र गर्ने र सरकारलाई काम गर्न नदिने खेल भएपछि आफूले नयाँ जनादेशको निर्णय लिएको उनले दावी गरेका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र महासचिव विष्णु पौडेलले अहिलेको अवस्थाका बारेमा आफ्नो धारणा राखेको एक निवर्तमान सांसदले जानकारी दिएका छन् । बैठकपछि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै केही सांसदहरुले आफूहरुलाई पार्टी फुट स्वीकार्य नभएको बताएका छन्